Kahle wabeka Curly izinwele njalo ibukeka bubuhle, ngisho Homely ukugunda izinwele iqhaza curling kungaba kwekhanda ephelele, ngoba ngenxa curling ukwazi ukufihla amaphutha wezinwele. ezisontekile - inketho ilungele labo abangakwazi ukuthola salon noma izinwele ikhula. Futhi uma wazi amacebo ambalwa mayelana nendlela ukoma izinwele curling ezinsimbini ke wenze isitayela enhle, ngeke kube nzima, kungakhathaliseki ukuthi kuyinto kwansuku inketho zezinwele noma kusihlwa.
Kungani curling? Sekuyisikhathi eside Ngoba chemistry ngefaskamu angishiyile, ngisho nokukhanya izinwele ukuhlala uthokomale ufunde usebenzisa curling - indlela ephephile futhi kulula ukwenza curls amahle. Ngaphezu kwalokho, kukhona manje ukuhlala uthokomale ufunde izinwele nge Imibhobho esemzimbeni evumela tshala ngesimo curls, futhi, ngokulandelana, futhi izinwele ngokwazo iyonke.
Indlela ukukhetha uhlobo curls
Ngaphambi ukuthola indlela ukoma izinwele curling ziboshwe ngozankosi, zase udinga ukuthi liyini isakhiwo kwakudingeka nokuphimisela ngokucacile curls. Kungenzeka nje izinwele wavy, le lemiklamo ngazinye izinwele noma mane of curls. Into eyinhloko ukuba ukhethe kwekhanda kahle enkosikazini yayo futhi umphelelisi isithombe sakhe. Ngakho-ke, kuyafaneleka ukuthi curls amancane ayiyi ladies izici ezinkulu. abesifazane ezikhuluphele nobuso izinwele wavy, kodwa abanikazi amafomu miniature ungazama ngama curls, bona ivumelane zezinwele ezahlukene izinwele curled.
Kunezinhlobo eziningana ploek, esikhulunywa abantu abaningi kubo - insimbi curling nge isiqeshana. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Indlela ukoma izinwele curling ezinsimbini nge isiqeshana, ngisho ukwazi yesikole. Le ndlela kulula kakhulu: imikhawulo izinwele ayaboshezelwa futhi ligijima curling, umoya umucu izinwele, ukukhiya ikhishwe ngemva kwemizuzwana embalwa, emva lwaluyophola kungenzeka ukuqondisa futhi ikamu.
Olunye uhlobo curling - ukuhlala uthokomale ufunde ngaphandle clamping. Singasho tapered futhi iqonde. Abantu abaningi basebenzisa i design obungajwayelekile ubukeka eziyinkimbinkimbi, kodwa akunjalo. Ukuze uqonde ukuthi ukoma izinwele curling ngaphandle clamping kuphela kudingeka isikhathi ukuzama ukusebenza naso. Lokhu ngensimbi curling zisebenzelana nesikhunta ngasese: ichopho umlomo wombhobho akuyona ukufuthelana, okuyinto wenza sikwazi ukubamba ne imicu emazombezombe ukuhlala uthokomale ufunde yensimbi isandla. Amalokhi Curly ngakho curling akuhlukile curls curled curling nge isiqeshana, kodwa ukusetshenziswa le oyindilinga curling izinwele zakhe kwenziwa njengoba zemvelo, izinwele kuyoba isakhiwo ezithakazelisayo yasekuqaleni.
Ukunakekelwa - ibe yisibambiso curls ephelele
Kuyaphawuleka ukuthi nakuba izithembiso umkhiqizi, umphumela ukushisa nhlobo curling inomphumela omubi phezu izinwele. Uma ukoma izinwele zakho nsuku zonke, futhi anakekele kufanele inikwe ukuqashelwa okukhethekile. Isinyathelo sokuqala ukukhetha imoto kwesokudla ukuthi ngeke ome out izinwele zakho, futhi ungakhohlwa samasonto onke amafutha buso.
Kahle kahle, ukusetshenziswa curling ezinsimbini kufanele kube hhayi ningi than suku nokuthi izinwele alithintwa ukushisa, udinga ukukhetha lokushisa kwesokudla. izinwele Ngakho mncane futhi bleached kufanele curled nge lokushisa okungenani, izinwele wavy udinga ukusebenzisa lokushisa naphakathi kanye mode esiphezulu senzelwe kuphela uqweqwe ezisontene.
Smartphone esiyinqaba: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza